सोनीकाले ३० लाखमा पार्लर खोल्दा बिरामी पारश पुग्दा ! अंगालो हाल्दै रोइन् सोनीका ……(भिडियो सहित) « Online Tv Nepal
सोनीकाले ३० लाखमा पार्लर खोल्दा बिरामी पारश पुग्दा ! अंगालो हाल्दै रोइन् सोनीका ……(भिडियो सहित)
Published : 8 March, 2020 5:18 pm
सुरूमा खनालले नै पारसलाई स्वागत गरे। माला लगाइदिए। त्यसपछि उनले शाहलाई धेरैपटक कोशिस गरेर सरसफाइ कार्यक्रमसम्म ल्याउन पाएको बताए।
‘हामी हर्षित छौं, पशुपतिको आँगन हेर्न पूर्वयुवराज आउनुभयो,’ खनालले भने, ‘हामी पढ्न छाडेर सरसफाइ अभियानमा जुटिरहेका छौं। सरसफाइका लागि पूर्वयुवराजलाई सडकमा ल्याउनु लाज हो।’
लगत्तै खनालले झाडु र पन्जा ल्याए। पन्जा लगाउन शाहलाई अनुरोध गरे पनि उनले मानेनन्। ‘पर्दैन, पर्दैन,’ शाहले भने। त्यसपछि उनले झाडु लिएर सरसफाइ सुरू गरेका थिए। उपस्थित सहभागीले ताली पिटेर स्वागत गरे। शाहले ल स्टार्ट, स्टार्ट भन्दै सरसफाइ सुरूवात गरेका थिए।
लगत्तै उनले सरसफाइ अभियन्ताहरूसँग फोटो खिचाए। फोटो खिच्ने क्रममा शाहले ब्यानर पनि चाहिन्छ भनेका थिए। पूर्वयुवराज शाह पशुपति परिसरमा सरसफाइमा जुट्दा खुसी देखिन्थे।